Ny Vivo V11 Pro dia afaka mirakitra horonantsary amin'ny 4K ankehitriny noho ny fanavaozana | Androidsis
Taorian'ny fandefasana vao haingana ny Vivo V11 Pro, izay fantatra amin'ny voalohany hoe V11, ny marika sinoa dia efa manana fanavaozana efa ela sy nandrasana efa vonona, iray izay mamela anao hanao zavatra izay, amin'ny fitsipika, tsy azonao atao: mirakitra horonan-tsary amin'ny famahana ny 4K.
Azo atao izany noho ny fonosana arisiva izay efa zarain'ny orinasa amin'ny alàlan'ny OTA ho an'ny fitaovana mid-range. Ao anatin'izany no misy fanatsarana sy fanamboarana lesoka kely mety hitranga, ary koa ny patch sy ny fanatsarana ny fiarovana azy ireo eo amin'ny haavon'ny rafitra fitoniana.
150.99 MB ihany ny fanavaozana, noho izany dia mendrika ny apetraka, tsy lazaina intsony fa ilaina ny hahafahana mandray an-tsoratra amin'ny 4K sy mankafy ny fikojakojana mifanaraka amin'ity volana ity. Ho an'ity dia mamporisika ny fampidinana azy io izahay raha tsy rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi sy manana ilay fitaovana miaraka am-batana bateria tsara, satria mety maharitra fotoana maharitra.
Ho fanampin'ny fandraketana horonantsary amin'ny vahaolana avo indrindra azo raisina amin'ny telefaona, hoy ny changelog, ny fanavaozana vaovao an'ny Vivo V11 Pro, izay voahodidin'ny fehezan-dalàna FunTouch OS 1.7.6, ary koa mitondra Smart Launcher vaovao izay mandray fampiasa isan-karazany. Misaotra an'io fa ho mora kokoa ny mamorona hitsin-dàlana ho an'ny hetsika haingana sy endri-javatra maro hafa. Ny fanavaozana koa dia manatsara ny valin'ny fikasihan'ny efijery, ary koa ny fahafaha-mihetsika amin'ny tambajotra.
Tadidio fa ny Vivo V11 Pro manana efijery AMOLED lehibe 6.41-inch lava. Io dia ahitsy amin'ny tahan'ny lafiny 19: 9 noho ireo pixel 2.340 x 1.080 tratra, noho izany dia manome antsika vahaolana feno FullHD + hatramin'ny 402 dpi. Mandritra izany fotoana izany dia mitondra processeur Snapdragon 660 octa-core, RAM 6 GB, habaka fitehirizana anatiny 128 GB ary bateria mahazaka 3.400 mAh miaraka amin'ny fanohanana famahana haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Vivo V11 Pro dia mahazo fanavaozana izay mamela azy handrakitra horonantsary amin'ny 4K
Ny Xiaomi Redmi Note 6 Pro dia tafaporitsaka indray, amin'ity indray mitoraka ity, miaraka amin'ny lisitry ny famaritana